Accueil > Gazetin'ny nosy > Sendika Seces: Tsy hanaiky harirariran’ny mpitondra fanjakana intsony
Sendika Seces: Tsy hanaiky harirariran’ny mpitondra fanjakana intsony
Nanao ny fivoriambeny teny amin’ny oniversiten’Antananarivo eny Ankatso ny alakamisy teo ny mpikambana ao amin’ny Sendikan’ny mpampianatra mpikaroka-mpikaroka mpampianatra (Seces) eto amin’ny Sampana Antananarivo.
Nisy ny fanapahan-kevitra noraisin’izy ireo ka noraketina tamin’ny fanambarana navoaka tamin’ny mpanao gazety izany.
Nohamafisin’izy ireo tamin’ny fanapahan-kevitra noraisiny àry ny fitakiany ny fandoavana ampahany faran’izay haingana ny tambim-pikarohana ho an’ireo mpikaoka efa misotro ronono na “Retraités chercheurs” mbola manatanteraka ny asany.
Leon’ny resabe sy fampanantenana poaka aty tsy misy fitazonana ny teny nifanomezana teo amin’ny minisitera mpiahy sy ny SECES Sampana Antananarivo momba ny famerana ho 125 ora isan-taona ny asa fikarohana sy fampianarana na “Obligation de service” ho an’ny taona 2015- 2016 sy ny manaraka rehetra mandra-pisian’ny fehezan-dalàna (didim-pitondrana na didim-panjakana) hasolo ny didim-panjakana 2005-098 sy ny didim-pitondrana 29-505 koa ireto mpampianatra mpikaroka ireto, raha ny fanambarana navoakan’izy ireo hatrany.
Nokianin’izy ireo koa ny fihetsika ny fitondram-panjakana na nilazan’ity sendika ity fa “tsy misy zanak’Ikalahafa eto amin’ity firenena ity ary tsy tokony hisy tombo sy hala, koa aoka hitovy ny famerana ny ora sy ny fandoavana ary ny fanatanterahana ankapobeny ny sandan’ny asa natao tamin’ny tombon’ora na ny “heures complémentaires” amin’ireo oniversite miankina amin’ny fanjakana manerana ny nosy”. Navoitran’ny sampana Seces eto Antananarivo tamin’izany fa “rehefa naloa avokoa ny asa vita tany amin’ny hafa dia tokony ho toy izay koa ny eto amin’ny Oniversiten’Antananarivo”. Takian’izy ireo koa, vokatr’izany ny handoavana ny ampahany faharoa amin’ny tambin-karama momba io tombon’ora niasana io tamin’ny 2015 -2016 sy ny tapany voalohany tamin’ny taona 2016 -2017.
Isan’ny fitakian’ireto sendikalista mpampianatra mpikaroka ireto ihany koa ny hamerenana toy ny taloha ny fanomezana “avis de crédit” isan-karama sy isam-bolana, no sady manana lanja sy hasina araka ny lalàna izany (valeur juridique) satria zo ara-dalàna sy hajaina eran-tany izany.
Eo anatrehan’ireo voalaza eo ambony dia tapaka tao amin’ny Fivoriambe ihany koa ho fanamafisana ny fitakiana fa hanao hetsika “Sit-in” eo amin’ny “Esplanade” -n’ny Oniversiten’Antananarivo ny SECES Sampana Antananarivo ny Alarobia 07 Martsa 2018 manomboka amin’ny 09 ora – 10 ora, izay tohizana amin’ny loabary an-dasy sy fifanakalozan-kevitra momba ny VINA ho fanatsarana ny asa fampianarana sy fikarohana mifandraika amin’ny zo sendikaly eo amin’ny SECES Antananarivo, ny solontenan’ny mpianatra (Associations pédagogiques), ary ireo solontenan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra.
Tsy nohadinoin’ity fivoriamben’ny mpikatroka ao amin’ny Sendika Seces Antananarivo ity ny nanainga ny fitondram-panjakana mba hamaha faran’izay haingana ireo olana tsy saro-bahana ireo. Tontolo mendrika sy mampiroborobo ny asa fampianarana sy fikarohana no sahaza ny Oniversiten’Antananarivo sy ireo foibem-pikarohana miorina eto Antananarivo, hoy ireto sendikalista ireto, mba hahafahana miantoka ny fitoniana sy fandriam-pahalemana na “paix sociale” sy mba ho tombotsoan’ireo toko telo mahamasa-nahandro, dia ny Mpampianatra-mpikaroka sy ny Mpikaroka-mpampianatra, ny mpandraharaha ary ny mpianatra.